Xanthos' Poems: 2011
ပထမဆုံး လုပ်မိတာက Log out ပဲ။
တစ်နေ့တာရဲ့ လေးပုံ ၃ ပုံကို computer ကို ကြည်ညိုနေရတာ
ကဗျာ/ဗီဒိယို ထဲ အတွဲလိုက်ပစ်ခတ်နေပုံပဲ။
ကဗျာများသည် မာသော အိပ်ရာဖြစ်ပါသည်။
ကျေးဇူးပြု၍ တိတ်ဆိတ်ခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးပြုပါ။
အန်ကယ်ကျောင်းမပြီးခဲ့ဘူး။ stay ဟန်းဂရီး stay foolish နေခဲ့တယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ... ဟုတ်ကဲ့ပါ အန်ကယ် (အသံနည်းနည်းအက်သလိုလို၊ ငိုသံပါသလိုလိုဖြစ်လာ)
အန်ကယ် presentation strategy ကိုပြောင်းခဲ့တယ်။
အန်ကယ် ဒီလောကကြီးကို လှလှပပကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်ဖြစ်စေခဲ့တယ်။
I-Quit ကို အန်ကယ်နောက်ဆုံးထွင်ခဲ့တယ်။
Apple shares ဈေးကြသွားရင် အန်ကယ် I-regret ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပေးပါ။
ပြောပြောဆိုဆို သူ I-phone 4s ကိုထုတ်တယ်။ Siri ကိုဖွင့်ပြီး။ Take me now to the paradise city လို့ထုံးစံအတိုင်း နှုတ်ခမ်းနည်းနည်းရွဲ့ပြီးပြောတယ်။ မရှေးမနှောင်းမှာပဲ "I-God ဆီက ပို့စ်ကတ်ရောက်လာတယ်။ Nice to meet you soon, fix the bugs in hell first!" လို့ရေးထားတယ်။ I-God ဆိုတဲ့ customer က အရင် survey လုပ်ထားတုန်းက တစ်မျိုးပါလားလို့ သူ့ခေါင်းကိုပွတ်ရင်းတီးတိုးရေရွတ်နေတယ်။ ဂျင်းပန်လေးနဲ့ အရပ်ရှည်ရှည် နှာခေါင်းချွန်ကြီးဟာ သူ့လမ်းသူ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးလျှောက်ပြီး ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီ။ သူ့ကိုလွမ်းနေမိဦးမယ်ထင်ပါရဲ့ဗျာ။ ။
တကယ်တော့ချစ်တယ်ဆိုတာ ကျည်ဆံအပြည့်ပါတဲ့ခြောက်လုံးပြူးနဲ့ Russian roulette Game ကစားခြင်းပါပဲ။
ရှူလိုက်လို့မဖြစ်တဲ့ အခိုက်အတန့် .................။
ခေါင်း ...ဆောင်....ကြီး.. ခြေ..ထောက် .....
အေးမဟုတ်ဘူးဆိုတာက သဘောမပေါက်သေးလို့၊ သဘောပေါက်လာရင်ဟုတ်လာမယ်။
ခေါင်း ...ဆောင်....ကြီး.... ခြေ....ထောက်
အာ အထစ်၊ မင်းသိထားဖို့က ဒီခြေထောက်တွေဟာ
သမိုင်းကိုနင်းခဲ့တဲ့ ခြေထောက်တွေနဲ့ ....
တပည့်တွေခမျာ နှာခေါင်းကိုပိတ်လို့ ...........။
ခပ်ဝေးဝေးမှာနေကြတယ်။ သူတို့သဘာဝထဲ အုတ်တွေ၊ကျောက်တွေ၊ အရောမခံနိုင်ဘူး။
အရောခံနိုင်တဲ့ တြိဂံကြတော့ ပိရမစ်ဘ၀ကို အရှင်လတ်လတ် ကူးသွားကြတယ်။
ခွဲစိတ်ဓားထဲမှာ ကဗျာမပါတော့ဘူး။ဆော့ဖ်ဝဲထဲမှာ ကဗျာမပါတော့ဘူး။အမှိုက်ပုံထဲမှာ ကဗျာမပါတော့ဘူး။၄:၄၄ မိနစ်မှာ အသက်ငင်နေသည့်တိုင်အောင်
၅:၅၅ မိနစ်မှာ သေဆုံးမယ်လို့အာမမခံနိုင်ဘူး။
Life is anti-U-trun road, dudes.
Our brake had broken.
သက်ကြားအိုတွေ မြက်စားပြိုင်တဲ့ပွဲ ...။အဟက်....ပလီပလာအစုံအလင်နဲ့တီတီတာတာပြောနေပုံက မသတီစရာ။ဘာဝနာအစား message မှာလာပွားနေတာကြီးကလည်း ရွံစရာ။(ေxာက်ရူးထရမယ့်အရွယ်ကအတော်လွန်ပြီ။)နေ၀င်ပြီေxာက်ရူးမရင့်နဲ့တော့ဆိုလဲမရ
လူမမြင်ရင် သိက္ခာမရှိကြတဲ့ နေရာ။ေxာက်အသက်နဲ့ေxာက်ရှက်အချိုးမညီဘဲကြီးလာကြ၊
ေxာက်ဦးနှောက်မရှိတာတွေပြော၊ေxာက်ဖျင်းမှန်းသိအောင် မဏ္ဍပ်တိုင်တက်၊ေxာက်အလုပ်မရှိေxာက်အလုပ်ရှာရိသလိုလို ကလိသလိုလို၊လူမှုရေးကိုဗန်းပြ၊စေတနာရှင်လိုလိုခါတော်မီပညာယှိလိုလို၊
ေxာက်ရူးတွေသိပ်ပေါတဲ့နေရာ။သံယောဇဉ်ခြောက်တွေ ရေနူးတဲ့ေxာက်ရူးက တစ်မှောင့်။
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းဟာေxာက်ရူးတွေအတွက် အခွင့်အလမ်းများစွာဖော်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ privacyလူတစ်ယောက်ရဲ့ dignityလူတစ်ယောက်ရဲ့ လူသားအမှတ်တံဆိပ်
ေxာက်ရူးတွေ တစ်သက် ဥာဏ်မမီတော့ဘူး။ေxာက်ရူးဟာေxာက်ရူးဥာဏ်နဲ့ဝင်ရောမယ်။အခန့်မသင့်ရင် ခွေးလိုဟောင်မယ်။ေxာက်ရူးဟာ ဥာဏ်မမီတာတွေမပါနိုင်တော့ဓာတ်ပုံလေးတွေ့ရင်တစ်ခုခုဝင်ပါချင်တာမျိုး။
Social Network ဟာ မင်းအမေxင် အိမ်မဟုတ်ဘူး။Ethics တော့လိုတယ်ေxာက်ရူးရဲ့ ဆိုတော့မျက်လုံးလေးကလယ်ကလယ်နဲ့၊ေxာက်ရူးက မသိတာမဟုတ်ဘူးမသိနိုင်တာ။ေxာက်ရူးကို
ေxာက်မြင်ကတ်လို့Block လိုက်တော့ေxာက်ရူးက တစ်မူးသာပြီးနာတယ်။ေxာက်ဖြစ်မရှိတာတွေေxာက်ရူးကမေ့ချင်တော့အလားတူေxာက်ရူးတွေ လိုက်ရှာဖို့
facebook ကိုသုံးတယ်။facebook ဟာေxာက်ရူးအများစုရဲ့ ရက်မှန်သောက်သုံးရတဲ့ ဖြေဆေးလည်းဖြစ်တယ်။
ေxာက်ရူး ကွန်မြူးနထီး အားကောင်းလာတဲ့အခါေxာက်ရူးဘ၀လုံခြုံရေး၊
ေxာက်ရူးနဲ့ခွေး စောင့်ရှောက်ရေးအသင်းအဖွဲ့တွေ ဖြစ်လာ၊ေxာက်ရူးချင်းပခုံးဖက်၊
အဲဒီအခါမှာတော့ေxာက်ရူးတွေဟာေxာက်ရမ်း ငြိမ်းချမ်းနေတော့တယ်။ ။
ထိုထို ကိုယ်အမူအယာနှုတ်အမူအယာချိုသာညင်းပြောင်းသွယ်လျ၊ကြမ်းရှခါးသက်လာရာမှအစချီပြုပြောကြံသည့်တိုင်အောင်မမြည်နိုင်သည့် အချိန်အခါမရောက်မီ နွမ်းဖတ်ယိုင်နဲ့ခဲ့ရသောမျှော်လင့်ချက်ပေါ်သို့ ဖိနပ်ချွတ်ပြီးမှတက်ကြပါရန်လေးနက်သော်လည်းသိမ်မွေ့တိုးသက်သောအသံဖြင့်ချော့မော့ပြောကြားသလိုနေစဉ်ခဏ ....... ဟင့်အင်းဆိုတာဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်လဲ ....အိပ်ချင်ပြီကွယ်....မနက်ဖြန်၊ဆန်ပုံးထဲမှာ အာကာသယာဉ်ပျက်ကျသွား၊ မီးတောင်များဆီမှပြာမှုန်များဝင်ရောက်နေထိုင်သွားသော အိမ်ထောင်ဦးစီးမျက်လုံးများ၊ရှင် ခေတ်ဟောင်းမှာနေခဲ့ရင်ကောင်းမှာ တဲ့လေ ...မဟုတ်ဘူးကွယ်၊ကိုယ်တကယ်ချစ်တာ၊ ပညာတတ်မာနထောင်းခနဲမြောင်းထဲလွင့်ထွက်သွားတဲ့ ၂၀၀၅၊၂၀၀၆၊၂၀၀၇၊ ကမ္ဘာကြီးမှာ ဂြိုဟ်ကြီးကိုးလုံးကနေရှစ်လုံးဖြစ်သွားသလို လောကဓံပါးရှစ်စိတ်ကွဲမတတ် ဖိနပ်နဲ့ရိုက်ရန်အရွယ်၊ ပါးစပ်ဟနေသလို ဟနေသော သားရေပြားကွာကတ္တီပါဖိနပ်ဟောင်းနွမ်း၊ခေတ်ကိုဖြတ်တိုက်ချသွားတဲ့ ကားနံပါတ်မကိုမမှတ်မိ၊ သောက်ရမ်း မောင်းချသွားတယ်ဆိုလား မြည်တွန်တောက်တီး၊ အမယ်အိုကြီးကို လမ်းဖယ်ပေးလိုက်ပြီ၊ ( အကျယ်ချုပ်မထားတော့ပါ )....ထိုအရာသည်ခိုစာကျွေးခြင်း၊ သမုဒယလည်ပုံပြတ်ပုံကို အာပေါင်အာရင်းသံသံဖြင့်ခိုင်မာပြခြင်းတစ်မျိုးပါလားဟုသံဝေဂမရခင် မင်း မင်း ... ဘုရားဘုရား .... ကြံမိကြံရာမှားယွင်းပါပကောလား အာမေဍိတ်ပြပွဲထွင်လုံးဆင်လုံးများရပ်တန့်သွားသလို ...စကားထစ်နေသောကဗျာများဖတ်ရင်း စိတ်ထစ်လာသလိုလို ခံရခက်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ မောဟ....ဟူးးးးမင်းရေးတာဖတ်ရတာမောတယ်ကွာ xanthos၊ေxာက်ရူး... ငါ့ကို ဒီတစ်ပတ်ဖတ်တာထဲက စိတ်ဝင်စားစရာပြော ...မင်းအဖေက မာကေးမဟုတ်ဘူး..သိပ်ရှည်တာမရေးနဲ့.....လူနားမလည်တဲ့အာပတ်သင့်တယ်ဆိုလားထိုသူပြောသွား Zephyr ဖြစ်ဟန်တူသလိုရှိ.....ဖွဖွကလေးရွှေ့လျောထွက်ခွာသွား ....လမ်းတစ်လျှောက် ...ထိုနေရာသို့အရွှေ့၊အကြည့်ပြောင်း၊အနှေးရိုက်ချက်၊ တီကောင် ...အထီးလည်းသူ၊အမလည်းသူ တွင်းထဲဝင်သွားတယ်လို့ အခိုင်အမာယုံကြည်လျက် တိမ်တိုက်နှင့်ပန်းပွင့်များကိုသူထားရစ်လေပြီ။